Xaqu Ma Iisho – Rasaasa News
Xaqu Ma Iisho
May 16, 2009 Jwxo-shiil
In kasta oo ay daalimiintu isku daydo in ay xaqa qariyaan, Ilahay quraankiisa ayuu ku cadeeyey in aan marna xaqa dabool la saari karin. Maanta oo ay ka soo wareegatay Dilkii Dr. Maxamed Sirad Dolal 120 maalmood ayaa waxaa ka soo baxaya kuwii isku dayayey in ay qariyaan dilkiisa in ay maanta cadaynayaan in dadkii dilay.
Maxamed Sirad Dolal oo ahaa xubinka ugu muhiimsan halganka ay wado Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], ayaa waxaa lagu dilay gacan qarsoon bishii Jan uary 17, 2009, waxaana si aan la fahmi karin Maydkiisa loo soo dhigay bogga EEGG.Com oo ay aad u taqaano ummada Somalida Ogadeeniya. Waxaana ku andacooday in ay ciidamadiisu tileen Cabdi Maxamed Cumar [Illey], oo isagu ah qabaanka Itobiya.
Waxaa ka dagi wayday caqliga dadka caadiga in uu Dr. Dolal ku dhintay gacanta Itobiya, balse rumaysteen in uu ku dhintay gacanta ururka ONLF, waxay dadweynuhu sharxi waayeen in ururka ONLF oo ahaa urur xornimo doon sida ay gacantoodu u qabatay xubinkii ugu muhiimsanaa ururka.
Waxaa la kala garan waayey in ay heshiis ku ahaayeen xubnaha ururk dilka Dr. Dolal iyo in qaar ka mid oo aan lahayn ujeedo xornimo ay u dileen si qabyaaladaysan iyaga oo ku soo gabanaya magac urur.
Tan iyo intii la soo sheegay dhimashada Dr. Dolal waxaa aloosan tahay xasaasiyad colaadeed, waxaa hoos u dhacday taageeradii ay dadku u hayeen ururka ONLF, taas badalkeeda waxaa muuqday in aan meelna lagu badbaadin karin xubnaha loo aanaynayo in ay ka dambeeyeen Dilka Dr. Dolal. Waxaa ilaa iyo hada la la,a yahay meel uu ku dhibcay Maxamed Cumar Cismaan, waxaana la qiyaasayaa in uu ka dhuumanayo shacabka Somalida Ogadeeniya oo aan hubo in ayna bad baadinaynin meesha ay ku arkaanba.
Bulshada Somalida Ogadeeniya way og tahay runtii cidii dishay Dr. Dolal, hase yeeshee waxayna ogayn sida loo dilay, waxayna jeclayn shacabka Somalida Ogadeeniya in ay wax sameeyaan dad ka gadoodsan dilka Dr. Dolal oo ay waxyeeleeyaan dad aan waxba galabsanin oo si qabiil ah wax lagu yeelo.
Hadaba, waxaa soo baxaya warar iyaga oo ayna cidina doonani iyagu iska imanay oo sheegaya sida ay wax u dhaceen, waxaa bogga u adeega gumaysiga Itobiya ee hore u soo bandhigay mayka Dr. Dolal, oo horeba loo lahaa waxaa maydkiisa u soo dhiibtay gacan saddexaad, balse markaasi ku faanay in ay iyagu dileen in ay maanta lee yihiin, Dr. Maxamed Sirad waxaa dilay Maxamed Cumar Cismaan iyo kuwa ku hareeraysan.
Waxaan hubaan, in ayna iloobaynin Dr. Dolal ururkii iyo umaddii uu Ilayska u ahaa, mudada ay doonto ha noqoteen waxaa hubaal ah in la heli doono dadkii ka dambeeyey, gacantii dishay Halgame Dr. Maxamed Sirad Dolal.
Waxaan kula talin lahaa cidii ku lug lahayd dilkiisa in ay sheegato inta ayna dhibaato ka wayn u soo jiidin ummada Ogadeeniya, si looga xaaltamo loogana hortago dhibaato gaadha ummada iyo halganka Somalida Ogadeeniya.
Nabad sugidda Itoobiya way Nagu Dhexjirtay Intii ka Dambeysay 1999